5 Mibvunzo Beyoncé — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Uchifunga, kana ndaiva mukana kuzosangana naye izvi mimwe mibvunzo I ungabvunza, zvimwe Ndichiri kushanda kuburikidza pachangu.
1. Sei simba Unofunga mumhanzi wako muupenyu uye tsika vechidiki?
2. Music inzira kuzvida okuti wakanaka, apo tine mukana kudurura manzwiro edu, pfungwa, uye kuchiva. Asi mamiriyoni evanhu mumhanzi ariwo Shandurwa muupenyu hwavo, uye zvinochinja kwavo nyika maonero. Unoita sei pakati nepakati nokuzvidzora okuti uye basa une sechinhu influencer?
3. Unofunga pfungwa yaunowana pachedu kunaka kwako uye zvepabonde (izvo kazhinji zvinotitsausa kubva unyanzvi hwako) chinopesana mashoko nziyo akafanana, "Pretty Zvinorwadza?” In kuti rwiyo, munoita sokuti kukurudzira vakadzi vaduku havana kuuraya pachavo vachitsvaka kukwana, uye kuisa pfungwa pane mweya yavo pane avo kunyemwerera. Asi unofunga dzose pakukwirira neezvitendero yedu beauty- rwamakandida zvakajeka misangano mabasa pamusoro mashoko kuti?
4. Pane imwe nzira kupemberera kuroorwa zvepabonde pasina flaunting romunhu pachake zvepabonde pachena uye vachiidza vamwe ruchiva?
5. Nei Jay-Z muna forties ake asi achiri unotonhorera kupfuura ini?
Idzi dzinongova nzira shomanana yemibvunzo vakauya muchibata usiku hwapfuura. Unoziva varume vane chero ndangariro?
naArani Rafael • Ndira 29, 2014 pa 11:12 ndiri • pindura
Chris • Ndira 29, 2014 pa 11:13 ndiri • pindura
Tinotenda BRO nokuti basa zvokuti haana kudzima kurwisa. Mbiru saka vazhinji chandakaona kubva vaKristu vave akatsamwa uye vakarasika.
TransformNotConform • Ndira 29, 2014 pa 9:29 pm • pindura
Izvi zvakanaka kuona. VaKristu vasingakurumidzi chete kufuratira matambudziko kana chete vose panze kurwiswa vanhu vachidanidzira “RAKO kuenda kugehena.” Just kuvamutsira nyatsocherechedza pane zvavanenge Vanobvuma uye kuti vaite. #CauseSomethingSureAintAddingUp Tinokutendai rwendo
Broc • Ndira 29, 2014 pa 11:14 ndiri • pindura
Ndinoda kukumbira naye pamusoro wake uye nemurume kubatanidzwa Illuminati. asi #5 vakanga ini tikaisa haha
Julia • Ndira 29, 2014 pa 11:15 ndiri • pindura
Ndinoda kuti mibvunzo ako worded. Iye simba zvikuru vasikana vose kwete chete vechiduku uye iye ndiye unyanzvi chaizvo. Asi ndinobvuma, dzimwe nguva tarenda rake pakukurirwa kwake nekutamba kana kushaya zvokupfeka.
Andrew HaHa Ross • Ndira 29, 2014 pa 11:17 ndiri • pindura
Ndaifarira sei iwe azviveza zvose iwe wakati norudo asi chinovaka nzira. Beyonce & dzimwe entertainers vari vakakwana nzvimbo kuti mienzaniso kuti vechidiki vedu asi ruzhinji vakaperevedza pfupi zvavo zvakawanda. Tinofanira kuramba vachivanamatira. Tariro zvose zvakanaka murume. Rambai muchiita chinhu kwenyu Umambo!
JasmineArogundade • Ndira 29, 2014 pa 11:19 ndiri • pindura
Ndinofunga kuti yaiva nzira yakanakisisa wokuti mibvunzo avo. shanduro My vavo angave Wee ikakuruma tsamwisa elnaz. Ndinokutendai nokuti muenzaniso & uyewo kushanda daily kuvhura marudzi’ muchibata kuna Kristu / zvaaitenda
Debbi • Ndira 29, 2014 pa 11:22 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti ichi.
Makarekare • Ndira 29, 2014 pa 11:25 ndiri • pindura
LOL @ #5. asi zvimwe, mibvunzo Legit kwerinenge wose uye munhu kana Pokuda mimhanzi indasitiri.
JonReagan • Ndira 29, 2014 pa 11:25 ndiri • pindura
Ndaifunga avo vaiva vakanaka uye zvichida anotokonya pfungwa asi rangarira isimba raMwari kuruponeso. Ndinoda kuti Evhangeri yakaisvonaka kuti aendeswe kwaari uye kutendera Mutsvene amuratidze kukanganisa kwake nzira ine tose. zvimwe, Handizivi kuti sei iye aizotarisira kuchinja. Zviya, muri nzira unotonhorera kupfuura JayZ. Way Nzvimbo!
Olivia • Ndira 29, 2014 pa 11:56 ndiri • pindura
I chechipiri- Way unotonhorera! :-)
Tenyll • Ndira 29, 2014 pa 1:00 pm • pindura
Leila. Bailey • Ndira 29, 2014 pa 11:27 ndiri • pindura
Ava vose mibvunzo zvikuru!!!!!!
#5 Zvisinei.. lol
JesiliaRose • Ndira 29, 2014 pa 11:29 ndiri • pindura
Iyi mibvunzo yakanaka rwendo Lee. Funga zviri nguva isu rega tuzvikonzero wake mumhanzi kunyanya vaKristu vanoteerera kwaari zvinhu. Ichi chikuru!
P.S. nomukomana wangu akati “Bhaana, uri unotonhorera kupfuura Jay-Z.” :) Mwari vakuropafadzei BRO.
Michelle • Ndira 29, 2014 pa 11:29 ndiri • pindura
Ndichida Beyoncé. Ari akanaka uye unyanzvi. Ndiri uyewo zvakadzama ukama hwangu naMwari. Kunyange ndinoda mudzimai uyu, Handizivi mimhanzi yake zvakare nekuti ndine chaiwo kwakadaro manzwiro mibvunzo yako kuratidza. Ndinovimba kuti uchawana mukana akumbire izvi nokuti ndinoda kunzwa mhinduro yake uye ona kuti iye anoyera hwake. Handina mutongo; Ini chete shamisika zviri kuitika muupenyu hwake. Ndinokutendai nokuti ichi.
Frank Gil • Ndira 29, 2014 pa 11:31 ndiri • pindura
Mubvunzo wokupedzisira zvazvo.
Great Pamazita. Ndinoda kunzwa mhinduro yake #3. Awesome Trip!
Justin • Ndira 29, 2014 pa 11:34 ndiri • pindura
Ndinoda mibvunzo iyi. Iwe ita chinhu basa rinoshamisa kutsanangura mibvunzo inokosha kuti vakawanda vedu tine naye ari kwazvo akafunga kubuda, uye nehanya nenzira. Uri kurudziro kwandiri nevamwe vakawanda. Tinovimba Blog wako anobata munhu (Ndinoziva ndicha-). Ndiani anoziva, pamwe nayo achakushumira Beyonce!
Zaeria • Ndira 29, 2014 pa 11:36 ndiri • pindura
Ndinoda kuziva, chii kana kana miganhu dzakatangwa pachedu nokuda kwenyu basa simba pamusoro chizvarwa chanhasi. kana zvakadaro, sei kubata nayo? Kana zvisiri, sei? (iyo yakaita piggy anotsigira pamubvunzo #2)
SusanBonnerDunston • Ndira 29, 2014 pa 11:40 ndiri • pindura
Zvakanaka akati Trip! Ndakaziva pamaiva wechokwadi jaya waMwari pandakatanga kunzwa nemi North Carolina
Olivia • Ndira 29, 2014 pa 11:43 ndiri • pindura
Ndinokutendai yenyu romukova. I ichangobva yaivamo vhidhiyo kuti inotsanangura zvakawanda pamusoro wake, ne “wake” achiudza wake nhaka (Sasha Vanotyisa) uye nzira iye vezvehondo pachikuva. Ndakatanga kuona mashoko Grammy kuti nevana vangu uye payakatanga kutamba ari wakandikumbira kuchinja chiteshi. Pandakabvunza Hamubvumirwi Info ichi musi mumwe nzvimbo kungotaura kutaura tinofanira kungwarira chii nevana vedu vanoona uye vanoyemura, Ini ruffled yakawanda minhenga. Ndinomboora saka kukuvara nenzira usingaoneki muvengi anoshandisa vanhu, nzvimbo uye zvinhu kusvikira ini dzimwe nguva adonhe utsinye. Ini handidi uye ndiri kudzidza vachiri. Izvi zvakanaka kuisa mukoma.
Timothy Brown • Ndira 29, 2014 pa 11:43 ndiri • pindura
Mataura kuti uri muKristu kakawanda, munofunga kuti mimhanzi iwe kubereka ari mufananidzo waKristu mamuri.
Rhionah • Ndira 31, 2014 pa 5:08 ndiri • pindura
Ini ndiri saka newe uyu musikana.
Tiheasha • Ndira 29, 2014 pa 11:43 ndiri • pindura
Amen, ndinokutendai ichi! Ndiri ndichipfeka kutambudzwa kwangu “mhuri” zvichireva hanzvadzi nehama munaKristu… nokuti abvunza mibvunzo chete uye nenyaya yangu ichangopfuura nyaya Beyoncé. Zvisinei Ndinongoti kuti Mwari akudzwa pasinei.
Cindy • Ndira 29, 2014 pa 11:48 ndiri • pindura
Zvakanaka kana akabvunza, nani asi.
ruthie • Ndira 29, 2014 pa 11:49 ndiri • pindura
Idai mibvunzo yakaoma. Ndakaona iwe Jay-Z, uye ndinokumbira kuti musiyane. Ramba kuva muenzaniso. Usatarisa shure! Ramba wakatarisa Up! Rega hwako Rumbidzai Mwari! Iwe Muchinjikwa Movement rubatsiro kurera vana vangu. Ndichaonga nokusingaperi kutsigira.
Allen • Ndira 29, 2014 pa 11:49 ndiri • pindura
Ndiri vanotenda kuti mibvunzo iyi ichapindurwa ne Beyoncé pachake rimwe zuva. Ndinoda nzira zvavari worded uye kudzama wokusvika mwoyo chakanaka “Sei”
Alexis • Ndira 29, 2014 pa 11:52 ndiri • pindura
Beyonce anogona kana varege kuuya kuyambuka this post, mibvunzo iyi, kana iwe muupenyu hwako. I zvikuru nazvo akanga mibvunzo iyi kana basa. Chokwadi kuti mibvunzo zvinofanira kukumbirwa zvingatora zvichiratidza kwegakava kuti iye anogona kana varege sokuti kugadzirisa.
Zvinogona chete kunzi mukuru unyanzvi, asi ndinofunga anouya aine basa guru. Munhu wake vakakurumbira hwakavaka basa rake pamusoro kuzvipokanidza izvi, uye kuramba zvinokurudzira naye. Ndinofunga pane tariro mibvunzo, kuti angasarudza kuvafunga. Tinovimba iye Ndinenge n chinzvimbo dzimwe nguva muupenyu hwake kuti funga navo. Ndinofara vakabvunzwa.
Nicky • Ndira 29, 2014 pa 11:55 ndiri • pindura
Ndinofarira mibvunzo yako. Havasi kutyisidzira uye anotokonya pfungwa. I kuti nokuva entertainer zvakaoma uye kuti vane upenyu hwavo kunze yokunyanya. Handizivi kuti vanoziva kuti nemhaka yenzvimbo yavo nguva dzose ari yokunyanya. Vazhinji Artist tuzvikonzero basa ravo nokutaura kuti “chete varaidzo.” Ndinoda kuziva kubva kwaari apo anoita “rinongova varaidzo” magumo? wo, kuti nokuva anoyemurika zvaanazvo kuti iye ndiye nokuda kukuvadza mumhanzi yake anoita(iye achishingaira akabvuma kuti chinzvimbo nokushanyira zvikoro uye kutaura nevana)?
OfficiallySmilez • Ndira 29, 2014 pa 12:07 pm • pindura
mibvunzo avo vari kuwanda alot vatendi pfungwa; vatendi vanoramba non-takasununguka pamusoro questionables vari anotombozivikanwawo. Ndinofunga kazhinji, tichikurumidza anokwezvera zvikanganiso vamwe Artists kana vanhu vakawanda zvatinoziva haisi chete kuuya kure sezvo mhosva asiwo kokutonga… Nokuti ndiani tiri???. Asi mibvunzo iyi unoita hazviwanzodaro. Kana Beyonce vaifanira kupindura mibvunzo iyi, iye, akazvifukidza, dai Ndinotenda pasina mubvunzo, vakatanga kuona kuti isu tose pamwe zvamaona; Zvinongoreva nokupindura mibvunzo.
Awesome uye setsa (mubvunzo pamusoro J.Z) :)
Kym • Ndira 29, 2014 pa 12:15 pm • pindura
I kubvumirana. Uri unotonhorera kupfuura Jay Z …iwe kudzidzisa uye afuridzire majaya mimhanzi yako nani…kurarama zviri nani…vanoda Jesu….rudo mhuri dzavo uye kukura kuva vanhu vomureza…zvino Ndiko tonhorera. Beyonce akanaka uye ane tarenda Zvisinei rwiyo wake rinobuda….”I angava muduku asi wokwaEfremu wakagadzirira”….rinokurudzira vasikana vaduku kuti mumaoko paruchiva uye pabonde kunze kana kuroorana… dzangu 13 nemuzukuru akanga kuimba it..smh. Sei kurudzira chivi?
Chim Chalera • Ndira 29, 2014 pa 12:17 pm • pindura
Wow iri rinotyisa Ndinotarisira mungaiwanepi mukana rwendo vemifananidzo vanoda Artists sewe kuumba nzira dzavo kunyange ndinoona kana mibvunzo vose vakanga chaizvo akabvunza yaizofara zvimwe ari agood akafunga dzemibvunzo zvose zvakakodzera vemifananidzo zvose uko zvakafanana beyonce.
Michael III • Ndira 29, 2014 pa 12:19 pm • pindura
Ndaifarira rwendo urwu. #5 aiva neni tikaisa. Asi ndidzo pfungwa huru wakatsamwiswa mibvunzo. Uye Artist zvose zvenyika uye muBhaibheri aifanira kukumbira themseleves nguva dzose Vakaisawo vasapedze unobatwa ane njanji.
Zvichida iye muchaona ichi uye kupindura nokuti imi :)
Johnnie K • Ndira 29, 2014 pa 12:28 pm • pindura
rwendo – mibvunzo Awesome, uye zvakakwana azviveza, BRO! Ndaitosvika aifanira kusimuka uye kusiya kwangu yokutandarira sezvaiita Natalie Grant panguva chokuratidza. Ini akatarisa anoratidza chete nekuti yangu 13 gore mwanakomana wekare aida, uye ndaida kuona zviri kuitika munyika mimhanzi, sezvo ini zvirire kubva vakawanda 10 makore apfuura. Pakanga paine 2 zvesimba kuti zvaaitaura-, “Oh, ndicho Jam yangu!” – Robin Thicke uye Pharrell. Ndaifanira kubvunza mwanakomana wangu kana aiziva kuti nziyo idzodzo dzaiva kunyange pamusoro, Akati aiziva asi haana kundiudza (pabonde uye objectifying vakadzi.) Saka pane divi pafiripi kune hadzi nziyo. Beyonce uye vamwe munhukadzi Artists’ nziyo kukonzera vakadzi kutaura zvepabonde kwavo uye ipapo objectified. Ndicho chinhu chakaipisisa kutenderera chivi inotungamirira vana vakawanda kudaro vabereki kuti murege hanya mumwe, nekuti ukama hwavo yakanga mumwe kwakavakirwa ruchiva… zvakadaro hazvo, Ndakagara kuparidzwa zvakakwana, basa rakanaka, unoda mimhanzi yako! – J
Alexis • Ndira 29, 2014 pa 12:32 pm • pindura
Mirira zvazvo… sei anomboitika iwe chete muvare #5 kubva pasi rino! LOL
Michael • Ndira 29, 2014 pa 12:36 pm • pindura
I kubvunza naye sei iye akasarudza kuva muimbi kuita mumhanzi hwenyika. Ndinoziva aiva muKristu kumashure, asi izvi hazviiti kuti ndinzwe zviri nani. iye, kufanana nevamwe vakawanda, vari panzvimbo kuva mukuru basa-yokutevedzera asi akasarudza chete kuva nevakawanda panzvimbo. Ndinovenga mureza isu akaisa nhasi sezvo vokuAmerica, kunyanya nokuti uduku.
Pane raita chitsamba, unoda mimhanzi yako. Unofanira kuita mumwe rwiyo pamwe Jimmy Nedum…..kana chero zita rake. Lol! Mibvunzo Good kunyange pakudzvinyirirwa.
Nicole • Ndira 29, 2014 pa 12:47 pm • pindura
Saka Ndaitofanira kutaura ndaverenga izvi yangu yakanakisisa Trip Lee izwi….vamupfira, izvi mimwe mibvunzo zvinotyisa! Ndinoda kuona bvunzurudzo iyi!!
Juanb • Ndira 29, 2014 pa 1:26 pm • pindura
Trip Lee! Ndinoziva here pamwe kuwana tani vanhu hollering pa yan asi ndinoda kutaura upenyu hwako uye mumhanzi kunge kurudziro huru uye chikomborero kufamba kwangu naJesu. On hurukuro yako, I chaizvo mibvunzo yose. #4 akaomerera kwandiri. (uye izvi zvinongova mafungiro angu Ndinonzwisisa ndine inzwi diki) Ndinotenda pane nzira kupemberera akaroora upenyu. Uye somuteveri waJesu, Ndinoufungisisa yaizova kuti vatendi havana vanoshandisa pachavo nezvepabonde kwavo. Zvakaoma kwandiri kuona mwoyo waJesu’ zviri music / upenyu kana ruzhinji nguva unozviona flaunting nezvepabonde yavo. Hapana rudo kuti. Just mukana muedzo. Munhu anofanira kufunga kuti anokudza Jehovha uye hama dzavo nehama uye sisters.But ipapo zvakare, kuti mhando rudo kuburikidza kufunga runobva semuKristu maonero.
Joanna • Ndira 29, 2014 pa 1:37 pm • pindura
Yess, Ndinoda mubvunzo #3!!! Its chaizvo ndanga kushamisika zvakare!
Milton • Ndira 29, 2014 pa 1:45 pm • pindura
Wagona kutaura….ndine 1 mwanakomana uye 3 uye ini vasikana ndiri soo kufara kuti ini akavamutsira kutarira emhizha kubudikidza zvibereko zvemabasa avo. Kana zvavanenge kusika havagoni zvinozadzisa neshoko raMwari. Unoda kuti zvokudya mweya yenyu? Ndinofunga muri WAY unotonhorera zvikuru kupinda Jay-Z.
Nikki • Ndira 29, 2014 pa 2:08 pm • pindura
Imi WAY unotonhorera kupfuura Jay-Z! Interesting kuti iwe ndokuisa nhasi ichi. I mahwekwe Video B kuti, “Best Thing I kumbobvira,” okupedzisira usiku YouTube pandaipinda kuburikidza nziyo vanenge 80 kuti. (??!!) Yakatanga naye chena lingerie, kana Ndinogona kunyange kumutumidza kuti. mwoyo wangu kuvadza sezvo I akaiona! Zviri saka chinorwadza kumuona & saka dzimwe dzakanaka dzakawanda & zvinoshamisa Artists tengesa zvepabonde pachavo & vanoshandisa nezvepabonde yavo. zvisinei, Ndine kukumbira, Varipi varume muupenyu hwavo? madzibaba avo varipiko & varume? Ko baba kwete B uye Jay-Z kuva “kurwa” nokuti kwaari vose kuti ivo? Ko ivo kudzivirira kwake & kukudza kwake zvose mazviri? Ini tichave vokutanga kutaura kuti vakadzi vanofanira kurega flaunting pachavo, asi ndichaimbawo kudenha vanhu tawedzera kusvika ndiro & kutanga kukudza madzimai. Ngatitaurei kusika munhu umo vakadzi anopembererwa & kukudzwa nokuda RUNAKO kwavo KWECHOKWADI & apo vanhu vanoremekedzwa. Ndichakuwanirai kure sipo yangu bhokisi ikozvino. :)
Pamela • Ndira 29, 2014 pa 2:18 pm • pindura
Wagona kutaura…Ndaifanira kuzvibvunza mibvunzo avo uye anoshanda kune vose isu kana uri muimbi kana kwete, chete airarama upenyu hwako munhu anogara kuona uye mumwe ari zvakare achiti Ndinoda kuva saizvozvo kana ini akura. Saka iva nechokwadi kana uchinyatsoda kudana pachako Kristu akaita, muchiita zvinhu zvinomiririra Kristu, Ndiko kusaka Ndinotenda vamwe vechiduku vakawanda vanovhiringidzika, ani vanofanira kutevera. Ndinovimba ayo Jesu Kristu uye iye chete, zvikasadaro ticharamba kutungamirira navo kugomba. Tinozvidavirira zvose zvatinoita, nekuti zviito zvinotaura zvinonzwika kupfuura mashoko. musicians Most uyo akatanga muchechi kuenda nyika nokuti isu havatsigiri dzedu dzechiKristu mumhanzi pamwe. – Vachida kunzwa mhinduro yake asi zvakakosha kuti kuda kwake kudzoka kwaJesu.
Virgil • Ndira 29, 2014 pa 2:20 pm • pindura
Jay -Z haasi hapana pedo unotonhorera ipapo Trip Lee!
Chelbia • Ndira 29, 2014 pa 2:46 pm • pindura
Tariro rimwe zuva iye achashandisa tarenda rake iro Mwari akamupa pakutanga….nokurumbidza uye kurumbidza chete naYe. Ari akamushandisa kushumira Mwari uye kushandiswa Hwake. Dhiabhorosi vakaba naye. Mwari ave gracefull kwaari.
Trinity • Ndira 29, 2014 pa 2:47 pm • pindura
Kutanga ndinoda izwi rako Trip!!! Hongu inzwi rako elnaz uye iwe haha! About mibvunzo ndinoda mubvunzo 4 uye 5 ndizvo hilarious, hapana Trip iwe unotonhorera.. Ndinofunga wakumbira norudo kwazvo uye nyasha uye uchenjeri.. Basa rakanaka.. Uye dai Jesu kubatsira kwete beyonce asi vazhinji vedu sevatendi.. Handizivi mimhanzi yake ndikasazovapo kunyange pakudzvinyirirwa..
Tony • Ndira 29, 2014 pa 3:54 pm • pindura
chinhu chokutanga chiri kutyaira kwake? Munhu ari kuenda kana nokuberekera miviri yavo kururama kana kusarurama. Hapana kudikanwa shuga jasi chinhu. Pane nzira inoita seyakanaka kumunhu asi kuguma rufu. Hongu tiri vatadzi uye muponisi, asi yakareba sei tikaramba kudira mvura mashoko?? Ko kuti yakafanana kereke muKorinde uyo kugadziriswa Paul? Chokwadi tinoda kutaurwa.
Meredith • Ndira 29, 2014 pa 4:19 pm • pindura
Mibvunzo yako semanzwiro avo ndava vaida akumbire uyewo. Ndinoda rudo kunzwa mhinduro yake mibvunzo iyi noruremekedzo dzama. Ndingadai kuwedzera “Sei zvenyu yakajeka mashoko anoratidza iwe pachako tsika?” uye “Most rwenziyo dzenyu itsva dzinosimudzira pabonde, muviri wako zvepabonde. Wacherekedza kunyora rwiyo kuti arumbidzwe Mwari akakukomborera nechipo chako nziyo uye fadza?” uye YES!..muri zvachose unotonhorera, mumwe Lyricist nani, uye muenzaniso wechokwadi “The Life Good”! Absolutely unoda mimhanzi yako!
Kruseaphix • Ndira 29, 2014 pa 4:25 pm • pindura
I Trip! Zvakanaka akati / akabvunza uye ndinofunga kwayo nguva yakakwana nekuti nyaya artistes nekufemera upenyu kuyaruka uye vechiduku havasati zvakawanda anoshayiwa abvunzurudzwe. Days shure, Ndikanzwa kutaura tetepa thug akati “mbudzana ani naani anoita pane zvaakataura rwiyo rwake haana kumutswa zvakanaka” uye ini ndakanga ndakafanana whaaa?! Aiti iye chete ane entertainer uye kuti kukwira kwayo vana zvavanodzidza uye Ndakafanana, “mudzidzisi aigona zvikuru kutaura,ayo basa rangu kudzidzisa asi vadzidzi vangu vane basa zvavanodzidza?.” Its chete anopenga fam. Aida mubvunzo ose sezvo ndine zvinyoronyoro nzvimbo nokuda Bey uye refu kumuona vagoponeswawo. Ndichava kugadzirisa iyi yangu inotevera pambiru saka y'all anogona kutarisa kuti pazuva kruseaphix.wordpress.com
John Mansaray • Ndira 29, 2014 pa 4:36 pm • pindura
Ichi akaiswa rumwe ruvara akanaka; okutanga kwatiri vateveri wako zvakawanda kujairika. kazhinji, Vatungamiriri vanowanzotevedzera kuchengetedza mureza kudada uye ukuru pamusoro vateveri vavo. Asi this post sokuti saka zvakadzama kuti anotikurudzira kuti kutenda kwechiKristu kwose pamusoro pokutsungirira. Ndinoshuva aikwanisa kuisa manzwiro angu zvomene pamusoro romukova ichi mashoko, asi ichi’ sezvo pedyo sezvo ndinogona kuwana. Ndatenda.
Gteqnix • Ndira 29, 2014 pa 4:40 pm • pindura
I rwendo, mibvunzo yakanaka. Zvechokwadi Don anoreva nothin kana iye neMhinduro kana kwete pfungwa nepfambi akaita Ur pfungwa. Ndianiko nokusingaperi ari kukuchidzira chavo vanofanira kutarisira zvakakwana kuratidza nayo kwariri…anit trippin buh rwendo, ure nzira yakanyanya HOT kuva inotonhorera Jay aint pamusoro Ur League…
Vicky • Ndira 29, 2014 pa 5:40 pm • pindura
“tenzi, mungatukisa nhaurirano pakati Trip uye B zvechokwadi?”
Gary • Ndira 29, 2014 pa 6:05 pm • pindura
Ndinochida.. uye nhamba 5 LOL
JOECLER • Ndira 29, 2014 pa 7:34 pm • pindura
yakadzika uye zvakanaka mubvunzo rwendo.
Allison • Ndira 29, 2014 pa 7:34 pm • pindura
Ndinofunga mibvunzo zvinokosha Ndinowanzofunga vanoshamisika zvino kuti iye ari mai kuti paizova nevamwe vasiri negotiables. Iye ane mwanasikana anotarira naye uyewo zvedu kana isu vakavarega. Ndakaona vamwe apo paIndaneti akati akasvika yakakurumbira kupinda .i chechi vanoonga 1.1.Six uye Inosvika Records zvechokwadi nokuti tingadai chinhu kuteerera to.God Bless y'all
John • Ndira 29, 2014 pa 8:34 pm • pindura
Iye anofanira Jesu. Asi varo kuita kuti iye ane kumupa upenyu kwaari. Zvikuru chokwadi iye achida kurega kukudzwa kwake kwaari. Asi kana iye akaita Iii chii nezvahunoita aigona kuva umambo.
Ndine gonna namata iye anoita. Tose tinofanira.
Natalie • Kukadzi 1, 2014 pa 5:13 pm • pindura
JennB • Ndira 29, 2014 pa 8:51 pm • pindura
dudziro My pachedu tsanangudzo shoko “kutonhora” asingadi kunongedzera Jay Z…. #SorryNotSorry
Ms Gee • Ndira 29, 2014 pa 9:00 pm • pindura
Trip Lee, kunyange ndaifunga mibvunzo vaiva hama vari muchiedza unyanzvi fomu mimhanzi, asi pamwe ndiri zvishoma yakasimba. zvichemo mibvunzo, yangu maonero regai ndijekese basa raanoita kuva muKristu (Kanenge Ndinofunga iri basa rake pachishandiswa affiliations hwake St. John UMC).
More zvakananga…Sei simba Unofunga mumhanzi wako muupenyu uye netsika vasikana vaduku navakadzi?
JSok • Ndira 29, 2014 pa 9:15 pm • pindura
Good Shoko Trip. Ndinoonga vazhinji mhinduro. Zvinokurudzira kuona vaKristu zvakakomba vanofunga uye kushamwaridzana chii akakurumbira tsika ari kutaura navo. Idai nzvimbo BRO, kunamatira Mwari achikomborera ushumiri hwako.
Otia Cole • Ndira 29, 2014 pa 9:59 pm • pindura
ndinoti, ndizvo zvazviri. Une kodzero yenyu pfungwa. Like iwe wakati,”imi mose muri vatadzi uye vanoda nyasha dzaMwari”. The musiyano iri, munoziva Shoko rinoti uye Beyonce haadaro. Nyengeterera akarasika kuti vapfidze uye nokurega nzira dzavo dzakaipa. Tripp, kuramba basa rakanaka uye kuteerera Jesu Kristu
ABROWN • Ndira 29, 2014 pa 10:23 pm • pindura
mibvunzo Good! Sezvandaitarisira yake achangodarika Grammy waivako, Ndaiva mwoyo, uye vakarwadziwa chaizvo. Sezvo Ndakafunga nezvazvo, Ndakatanga kunzwa urombo naye, nekuti ndaiziva haana kufukidzwa nomurume wake. Real rudo cover, haina henyu wako mudzimai kufukura pachena kuti nyika.
ZERO • Ndira 29, 2014 pa 10:51 pm • pindura
Ndinoda nzira iyi yakanyorwa. mibvunzo Good kuitwa rudo, aita zvakanaka mukoma ! #Vakurudzirwa
Chepe • Ndira 29, 2014 pa 11:52 pm • pindura
The mibvunzo tisaone Ndinovimba iye akanzwa nezvazvo. Vane vanoremekedzwa uye vakatendeseka mibvunzo vanhu vakawanda vanofarira wake unyanzvi vane.
kimeka • Ndira 30, 2014 pa 12:21 ndiri • pindura
Zvakanaka havasi imi achizvininipisa munhu I zvawaverenga pamusoro Bey mwedzi rose. Ndinokutendai pakururamisa muenzaniso ichi chikuru.
Chelbia • Ndira 30, 2014 pa 5:34 ndiri • pindura
Ndaive kumuteerera, bcz ndinomuda inzwi kwazvo! asi ikozvino mumhanzi yake yose akabuda mumba mangu bcz iye ari kukurudzira dzepabonde, evanhu, uye kupandukira. Kune mweya yakaipa kushanda muchimwiro naye influance vasikana vaduku chaizvo kubva pakutanga. Its zvinosuruvarisa I kuzvidzivirira mwanasikana wangu kubva 5 makore kubva pavakadzi zvakanakisa uye chipo aiva uye vanofanira kuva vakadzi Mwari asi ikozvino rinoshandiswa ushe rima. Vamwe nguva Handizivi kana iye anoziva ichi kana kwete? Pamwe uye zvichida mukati make iye anoziva kwazvo kuti iye varasikirwa nayo… asi ndinonzwa kuti iye wakafanana prisoner..there hapana nzira nyore kubuda naye… Jesu offcourse Only! Anorega kunyengeterera chishamiso! Mwari ave nenyasha kwaari!
Rachel • Ndira 30, 2014 pa 6:27 ndiri • pindura
Ndinobvumirana Trip Lee, kusiya…. Kuti iye ROTI unotonhorera pane Jay-Z… uyewo mupfungwa iye achava munzvimbo inotonhorera pamumvuri woWemasimbaose pane inopisa gehena ;)
herblessedseeds Her • Ndira 30, 2014 pa 9:10 ndiri • pindura
Ndinoonga chido kutanga nhaurirano iyi Rudo tariro yokuwana mamwe nechokwadi uye chokwadi kubva kamwe nokuzviremekedza vakazivisa wechiKristu Beyoncé. Nhaurirano Izvi zvinofanira kuramba achienda , pamwe isu , VaKristu vose . hatifaniri kumanikidza chokwadi , Zvinongoreva nokurusima . Sylvia Fanali herblessedseeds, on Facebook uye Instagram
Vicki pizazzi • Ndira 30, 2014 pa 9:14 ndiri • pindura
Ndinoda Trip Lee.
PJ • Ndira 30, 2014 pa 9:59 ndiri • pindura
Wow! Izvi rinotyisa! Straight zvokusvika, asi zvakadaro achiri tinovaremekedza. Ndinoziva yakawanda zvedu dzavhiringidzika kuti chii chakaitika kuna Beyoncé isu vaKristu zvaiita nguva dzose ngakurege kuva kupfuure nokuda kwake “kutenda”.
Taniqua • Ndira 30, 2014 pa 11:53 ndiri • pindura
mibvunzo yenyu akandiita kufunga kuti ndinoona Beyonce. Ndinofunga kuti iye zvikuru unyanzvi. Ndinoremekedza wake ndege. Ini hameno kuti aizoita mibvunzo avo. Zvingava zvinonakidza. Great pfungwa pamusoro vakanaka unotema rwiyo. Iye ari kuudza vasikana kwete kuuraya pachavo kuva akakwana, asi iye anosangana nyika pachiyero….. Hmmm anoita munhu funga.
diggity • Ndira 30, 2014 pa 12:11 pm • pindura
ndinofarira wako questions.but mubvunzo 5 achipfeka kuti kamwe wawana wapfuura 40 iwe pum kutarisa inotonhorera kana kuva inotonhorera .I Don vanofunga thats zvine kubvuma…zvakajeka
RichieBeadle • Ndira 30, 2014 pa 12:49 pm • pindura
mibvunzo Great, rwendo! Uye ini zvangoitika kuti kuverenga ichi sezvo vamwe rwendo-mimhanzi yaunonyanya akauya pamusoro headset yangu Playlist!
Mibvunzo yako anoratidza udzamu, zvechokwadi hanya uye aikanganiswa, uye zvinoita sokuti kubva panzvimbo hanya. Asi nei kunyange vanofanira ichi Mega-semutambi verenga mibvunzo yako kunyange, ndoda kuvapindura? tsime – kubva maonero angu – iye fanira, nekuti hausi kukumbira chinhu wake urege kuzvibvunza!
Chii umboo? tsime, Ndiri kuteerera zvino…”Ndiyo nguva yokuti kuzviongorora, tinoda kuzviongorora, yava nguva kuzviongorora, tinoda kuzviongorora pamwe!”
Ongorora kunze Beyonce! Newewo, Jay-Z! (Zvakanyorwa kunzi Self Kuongororwa) :-)
Chinth • Ndira 30, 2014 pa 5:28 pm • pindura
Hey rwendo, Mibvunzo yako zviri nyore, asi vakafunga afunge. It achiposa kuti muverengi pfungwa kuzvida ongororo uyewo, pfungwa basa kurarama hupenyu hwedu vakakodzera evhangeri takagamuchira Vanombundikira nezuva, asi haana kubva inzvimbo nokuzvikudza, asi nguva dzose Kuzvininipisa uye rudo. rudo. rudo. rudo. Rudo wakachena akasimba kupfuura guva. Ini dont kuziva nei kana chii chinoita inotapira beyonce kuita zvinhu iye anoita. asi isu vakadanwa kuda uye vomutsa kuda, uye kushumira. uye ndinofunga kubvunza mibvunzo kuti nderamadzimambo pokusanaya mwoyo wakanaka nokuda mwoyo. uye zvakanaka zvakatsamwisa ;)
Ndinokutendai nokuti rudo
p.s Jay z chinokutambudza inotonhorera kuti chikoro murume
Bethany • Ndira 30, 2014 pa 6:02 pm • pindura
I gotta ndinoti,basa rakanaka iri nyaya. Ndiri saka kushandiswa kunzwa vanhu bash wake,asi kunzwa iwe zvechokwadi mibvunzo zvechokwadi kuti ini dzimwe nguva kufunga kana pandinomuona. Ndakanga chaizvoizvo asina kuenda kuverenga nyaya nokuti ndakanga chete ndaneta vanhu kupopotera. pfungwa dzakanaka.
kuenda • Ndira 30, 2014 pa 8:06 pm • pindura
Iwe saka nomutsa kuna ano moyo unotya! Rudo rwaMwari runofashamira ari Blog ino. Vakuropafadzei okugumburisa!
Asne • Ndira 30, 2014 pa 10:00 pm • pindura
Ndinofanira kutaura zvose mibvunzo akanga kwazvo anosiyiwa panhamba 5( Ndinoona apo muri kuuya kubva kunyange, asi Jay-Z haisi inotonhora uye defintely kwete unotonhorera pane munhu mupenyu Ishe.). Zvinoratidzika sokuti iwe defintely hanya nechokwadi pamusoro mukadzi. Handidi kusvetukira upi mhedziso, sezvinonzi hamaizopa akagoverana Evhangeri naye pashure aendesa avo 4 anotokonya pfungwa mibvunzo kutanga. zvisinei, Ini vanobvumirana mumwe commenter(JONREAGAN) pamusoro Blog ichi. The Gospel ndiye mwoyo chete / pfungwa-kuchinja. Zvingava zvikuru kana iye anzwa kubva munhu(sewe) uyo zvakare mumabasa mumhanzi(kunyange imi vaviri vari pamakwara siyana) uye ziva kudzika zviri pesvedzero. Tinotenda Trip kuti chido chako chokushumira Jehovha wedu, zvinokurudzira mumwe akafanana neni ndiani inotya chaizvo kana toreva kuvaka ukama nevanhu uye nekugoverana Vhangeri. Mwari akuropafadzei uye mhuri yako!
Asne • Ndira 30, 2014 pa 10:21 pm • pindura
Ndine hurombo, I Wakanganwa kuwedzera mubvunzo kuti ndinoda kuti imi kubvunza. Zvingava zvikuru kana unogona kukumbira kwake: Kworudzii music / mashoko munotenda mubereki vanofanira kudzivirira vana vavo kubva?
MichelleJ • Ndira 31, 2014 pa 12:57 ndiri • pindura
Ndiyo nzira yakanaka kuti kurukurirano rinopfungaira. Ndiri pachangu munhu kukuchidzira wake pachangu, asi ini vanoona kwazvo zvakaoma nemuromo tichidudza mupenyu, achidzidzisa uye kukurudzira Godly anoti apo (muchivande) jamming kune Makwara yake. Patova kungotamburira kweminiti, kunyanya sezvo ndiri pamwe Houstonian uye alumna chikoro chake giredhi. Ndiri vakakomba, Ndinokuudzai Ya!
Nyasha norugare fam!
Asne • Kukadzi 1, 2014 pa 12:03 ndiri • pindura
Hi MichelleJ, zvakanaka kwazvo uye utano hwakanaka akachenjera mumudzimu kuti iwe unzwe convinction muupenyu hwako kana totaura kupikisana. I kukukurudzira kunyengetera feverently kuti Ishe anobvisa kuti chido kuteerera mumhanzi yake iri pachena Anti-Kristu munzira dzakawanda, Okay handidi kuti zvokunyengerera nayo, dzakawanda mumhanzi wake aSatani asi kwezva. Ndinoziva kuti handisi kukutaurirai chinhu kuti hauzivi kare pamusoro mumhanzi wake kuva Anti-Kristu, asi ndapota ndinzwei kunze. wo, kuwana munhu(mumwe mutendi Ichokwadi) ani unogona kuvimba kuti kwauri uye tsanangura / kureurura kutamburira wako naye. Tose tine mukurwisana zvinotyisa uye kupa Jehovha isu Grace Wake kukunda matambudziko edu.
P.S. Kwete kukururamisirai mimhanzi yake asi zvakanga kufunga murege nemaune kuuya kuna Jehovha nyadzi uye teerera pachena pamberi pevanhu vari kutarisa uve muenzaniso waKristu. Jehovha ngaave newe.
Libb • Kukadzi 1, 2014 pa 3:41 pm • pindura
Ini ndakauraya nemibvunzo yakafanana. Shamwari dzangu dzakawanda meso Beyoncé izvo matambudzo ini zvizhinji chaizvoizvo. Zviri Zvinosuruvarisa kuti kuva seksikäs ndizvo zvavari kuedza kuti somugumisiro kwake simba. Iye zvakare yaiswa yakatanhamara, saka vamwe vanhu akafanana ari kudaro unyanzvi, iye anogona kuita zvisakarurama… havaiti funga achitsoropodza zvaakanga ari kutaura uye kuita uye sei unochinja kuti pavo… mangoti vachindinzwa Beyoncé kuti zvose zvakanaka, pasinei shoko, riri chaizvo. saka ehe, Ndiri kufara chaizvo kuti Trip ari kubvunza mibvunzo iyi – iye ari munhu akafanana nesu uye tinofanira kufungisisa chii iye anoita uye ani iye ari achifurira sekuda President of United States… iye vari nhau sezvinoita zvikuru, kana asina kupfuura.
Natalie • Kukadzi 1, 2014 pa 5:06 pm • pindura
Hey okugumburisa munoziva #5 kuti yaiva zvinhu ipapo chaipo haaa!!!
zvakanaka ndinoti wawana kuzotaura illuminati sezvinongoitawo kunoita wokudhinda zvakaipa yaro chaiyo, chiripo here chete kuti arinde uchapupu dmx kuti Kristu uye zvakaitwa illuminati zvaakaita naye kuziva izvi.
I aint achiti J-z definately ane kubatanidzwa asi rihanna uye iye haana kubiridzira uye zvisiri zvinobatanidzwa yayo yose zvishoma kuti masanga..
ndinoda beyonce kwake MWARI WAKAPIWA tarenda.. ayo chibereko chomudzimu wake..
uye zvakawanda ndinoda nedoro murudo ( sechipo rwiyo kubva kwaari kunofanira dzakavanzika PFUPI navo kwete tichione ) Ndinoita vanonzwa iye zvamutambudza, Ndinodavira chaizvoizvo funga rihanna yose chinhu dented kutenda kwake, wake kuzvida Kudavira, uye nokuzvidzora rudo kuti isu tose tinofanira kuva vamwe..
iye anofanira minyengetero yedu!! Ndinokutendai nokuti haadi kurwisa kwake mibvunzo yenyu, Ndinotenda mutsvene vashambemo iwe nouchenjeri pachinzvimbo kwokutonga.. rinoti riri bhaibheri isu ngaarege kutonga.. asi vaKristu vakawanda vane ichi sezvo kuzvinyengera. mhuri yangu vakaita izvi.. kusanganisira ini.. uye muenzaniso KRISTU! ropafadzai mwari iwe mumhanzi, ushumiri hwako kuburikidza mumhanzi uye mwari ropafadzai beyonce nokuti achauya shure simba romunyengetero akasimba kupfuura madhimoni jasi CHIVI!
Jacob • Kukadzi 1, 2014 pa 10:10 pm • pindura
Interesting asi tonhorera!
Chioma • Kukadzi 3, 2014 pa 7:05 ndiri • pindura
Saka zvakanaka kuti Yu kusatonga naye kana kwebhosvo yake N #5 I knw nzira yu're unotonhorera kupfuura Jay-Z….
Demarcus • Kukadzi 5, 2014 pa 7:47 ndiri • pindura
I rudo uye handisi chokwadi pamusoro uyu? Asi haana vaviri imi vakaimba mukereke kana wakapata hombe basa mukereke? Ndinofunga kuti unofanira kuzviita. Ndiri kukunamatira.
Kay • Kukadzi 5, 2014 pa 8:31 ndiri • pindura
Ndinokutendai nokuti mibvunzo kuti vazhinji vedu vachida kubvunza. Sezvo uine pachikuva kudaro, isu tose tinoonga iwe. Mwari akanaka, uye nekuti iwe wakatora nguva kubva yako zvokuita kubvunza izvi mhando mibvunzo nenyanzvi chaizvo nenzira, Iye vachakuripira pachena. Paunenge waiti, muve mutadzi, sezvo tose tiri, asi kana wabvuma Jesu Kristu semuponisi wako, iwe, changamire, zvino mutadzi Akaponeswa Grace. Amen!
Aric • Kukadzi 6, 2014 pa 9:30 ndiri • pindura
Ndinofunga iye ava simba zvikuru zvakaipa manjemanje, munhu anoenda hafu akashama pachikuva anofanira uongorore zvakare pane kwavo kuita kuti mamiriro ezvinhu. Ini ndiri chaizvo kufara yedu Lady First nokuti kutsigira zvikuru approiate musicians. Obama Ndizvo kutsigira seculier Rap Artist vanotsigira mhirizhonga apo aifanira kuva pamusoro kuti!
famba • Kukadzi 7, 2014 pa 1:15 ndiri • pindura
Am chaizvoizvo greatful nokuti nzira iwe akaronga mibvunzo( ari None kokutonga nzira) kuti rinotyisa. ikozvino, takasikwa kuti midziyo yaMwari yokunamatira kuburikidza nokurarama upenyu pakunamata (munamato, kuverenga uye kufungisisa Shoko raMwari, kuparidzira uye kudzidzisa vamwe rwaMwari uye kuda kwavari. Saka anoita kunyengeterera vaya vakatipoteredza, kuti vaone kuburikidza meso Mwari uye kwete maererano nenzira dzenyika sezvo zvakare tinopupura basa raMwari.
moyo murefu • Kukadzi 12, 2014 pa 12:13 pm • pindura
Lots vechiduku kuchikoro yangu tora pamusoro pangu uye ndinoziva kuti beyonce anogona kuchinja kuti saka ndinoda wake kuva shamwari yepedyo yangu uye vanouya kuchikoro yangu kuudza vanhu kuti ini nomurume ishamwari
Jess • Kukadzi 12, 2014 pa 2:03 pm • pindura
Kunyange Jesu aigara nevatadzi.
Tiri kunzi kufamba rudo uye kubatsira vose Kristu.
mutsa • Kukadzi 13, 2014 pa 12:23 pm • pindura
avo vana (mubvunzo 5 haana vayambuka pfungwa dzangu pane zvose, Ndinofunga muri unotonhorera) mibvunzo kupfupikisa zvose 100 Mumwe Ndine pamusoro Beyoncè.
chinounza • Kurume 2, 2014 pa 2:57 ndiri • pindura
Just thinkin anomboitika nepfambi vachiti yall vari vaviri vatadzi kutsvaka Gods nyasha. Iye chokwadi anoita iye ane uye akakwana. Iye akamuka vaoni vakawanda N mweya nyore kuti akande mapfumo. Iye achava ndine zvakawanda ichi upenyu chikonzero iri Heaven wake. Dhiyabhorosi ari pano uye kutenda here kana kwete thats sei anoshanda. Haana mano chete chikonzero iye satin, asi iye haana baba Vekudenga kumbobvira kupa nepfambi zvakawanda kana rudo nepfambi kupfuura Mwari Wemasimbaose. Ndatenda
wakaramba • Kurume 11, 2014 pa 4:01 pm • pindura
Ndinoda this post! Iyi mimwe yemibvunzo makuru. Artists kazhinji vanokanganwa simba vane vechiduku, kana vanhu vose, uye havazivi uwandu kufurirwa uye kuvhiringidzika kuti anogona anogona kukonzerwa.
Ndapota rambai kubvumira Mwari kushandisa iwe uye kupedza basa raakatipa akatanga mamuri. Luv.
P.S. Tatenda Pakupindura nei iwe akaroora musikana chena…lol!
Tiffanie • Kubvumbi 3, 2014 pa 9:55 ndiri • pindura
Awesome nyaya. Thanks sevashandi vanoteerera uye nekugoverana. Ropafadzai iwe nemhuri yako.
Ashley D. • Chikunguru 14, 2014 pa 10:29 pm • pindura
Julia kutongokwizwa • Gumiguru 14, 2014 pa 10:08 ndiri • pindura
Waaaaaaayyyyyy unotonhorera kupfuura JayZ. Waaaaaaaaaaayyyyyyyy.
Taurai: Pastor-Rapper Trip Lee Talks Calling Youth to 'Rise' uye Kushumirana Fans pamusoro Personal Level (Video) - Social News Dashboard
Live Sex Show • Chikunguru 29, 2019 pa 2:18 pm • pindura
Nyaya Very zvakanaka. Ndinoda chaizvo ichi
Website. Ramba wakadaro!